The Cumulonimbus | Saadaasha Shabakadda
A. Stephen | | Sawirro, Daruuro
Si loo joojiyo dib u eegista aan ku noocyada daruuraha kala duwan Waxaan wax ka qabannaa waxa suurto gal ah daruuraha ugu xiisaha badan uguna xiisaha badan, waxaan tixraacnaa Cumulonimbus, Nooca labaad ee daruuraha horumarka toosan, in kastoo xaqiiqda ay tahay natiijada kutlada leh horumar weyn.
Sida laga soo xigtay WMO waxaa lagu sharaxay daruur qaro weyn oo cufan, oo leh a horumar toosan oo muuqda, qaab buur ama munaarado waaweyn. Qeyb, uguyaraan dusha sare, caadi ahaan waa siman yahay, xajiin ama xaraarad leh, oo had iyo jeerna la simo; qaybtani waxaa badanaa lagu dheereeyaa qaab qudhaanjo ama tuunbo aad u weyn. Hoosta hoose ee mugdiga badan, daruuro jajaban oo hooseeya iyo roob ama roobab ayaa soo baxaya.
Sidii aan soo sheegnay, Cumulonimbus waa tallaabada xigta ee horumarka, marka loo eego miisaanka kor u kaca ee isdabamarinta, ee loo yaqaan 'Cumulus Congestus', sidaa darteed, waxay yihiin daruuro horumar ballaaran oo toosan leh (dusha sare ayaa inta badan u dhexeeya 8 iyo 14 km sare) Meelahayaga loo yaqaan 'latitude' waxay badanaa ka soo baxaan guga iyo xagaaga xaaladaha aan degganeyn.
Waxay ka kooban yihiin dhibco biyo ah iyo kristantarro baraf ah oo korka ku yaal ama xamaam. Gudaha gudihiisa waxa kale oo ku jira dhibco roob, baraf baraf ah, baraf la soo saaray, roob dhagaxyaale iyo xaalado xasillooni darro ba'an baraf baaxad weyn.
Had iyo jeer wax bay soo saaraan duufaan, taas oo ah, roob qaab qubeys ah, roob ama roobdhagax, guud ahaan, in kasta oo sidoo kale baraf jiro xilliga qaboobaha, oo ay weheliyaan dabeylo qulqulaya iyo dheecaanno koronto oo ka dhaca daruuraha dhexdooda ama daruuraha iyo dhulka (hillaaca).
Cumulonimbus waa boqorrada daruuraha, kuwa ugu sawiran iyo ugu caansan. Waxay isku amaahiyaan in lagu sawiro xaalad kasta waana wax xiiso leh in lagu sawiro iyaga oo taxan dhameystiran oo duufaan ah. Yaan lagu wareerin Cumulus congestus maaddaama Cumulonimbus ay dheer yihiin, waxay ku soo bandhigayaan qaabdhismeed buurbuur dusha sare.
Waxay leeyihiin laba nooc (Calvus iyo Capillatus) mana jiraan noocyo.
Xigasho - AEMET
Macluumaad dheeraad ah - Cumulus
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Sawirro » Cumulonimbus-ka
Ifafaalaha sadexda qorraxood
Dhacdooyinka ugu naxdinta badan ee Australia